शृंखला लेख्छिन् 'मनिषाले सफलता मेहनतले पाएकी हुन्'
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ०८, २०७७१८:४८
फिल्म । अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपालले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साबारे प्रतिक्रिया दिँदा भारतीय मिडिया तरंगित बन्यो । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेको नयाँ नक्सा सहितको ट्विटलाई री-ट्विट गरेकी थिइन् । यसलाइ देख्ने वितिकै तत्कालै भारतका केही सत्तापक्षधर मिडियाको रुपमा चिनिएका मिडियाले मनिषाको व्यक्तिगत टिप्पणीमै उत्रिए । उनको ट्विटलाई लिएर विभिन्न खाले भ्रामक खबर फैल्याउन थाले ।
मनिषा माथि भारतीय मिडियाको बढ्दो हस्तक्षेपलाई देखेर नेपालीहरु उनको समर्थनमा अगाडी आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिनेत्री , अभिनेता , राजनीतिज्ञ , समाजसेवी हरुले मनिषा थि रहेको प्रतिक्रिया दिई रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सन् २०१८ कि मिस नेपाल शृंखला खतिवडा पनि आफ्नो भनाइ सहित अगाडी आएकी छिन् । उनले ट्विटरमा आइएम विथ मनिषा कोइराला (#IAMWITHMANISHAKOIRALA) ह्यासट्याग गर्दै आफ्नो विचार राखेकी छिन् ।
उनले बलिउडमा आफ्नो स्थान बनाउने कारण प्रतिभा रागेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले दर्शकको मायाले मनिषा अगाडी बढेको तर्क गर्दै उनले भारतीय मिडियालाई हुर्कन र केटाकेटी जस्तो कुरा नगर्न भनेकी छिन् । उनले भारतीय मिडियाको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै मनिषाले पाएको सफलता मेहनतको उपज रहेकोमा जोड दिएकी छिन् । उनले गरेको ट्विट यस्तो छ :-
for makingacareer in Bollywood. She made her mark with her talent, audience loved her for her performances. She earned it!
एरियानाको ‘थ्यांक यु , नेक्स्ट’ ले बनायो नयाँ रेकर्ड
सलिन स्टारर ‘यात्रा’ ट्रेण्डिङको पहिलो स्थानमा
प्रेमलीलाको ‘मिस गरे’ सार्वजानिक (भिडियो)